China Truck Side Mirror PK9822 Mpanamboatra sy mpamatsy | Tetezana Andrefana
Ny kalitao avo lenta PK9822 dia fitaratry ny kamio ho an'ny andian-dahatsoratra New Hino & Volvo F110. Manao ny vokatra rehetra mahafinaritra sy maharitra ho an'ny mpanjifanay izahay. Manana ny mari-pahaizana momba ny CE sy ISO9001: 2008 izahay hiantohana ny kalitaon'ny vokatray.
Ny kalitao avo lenta PK9822 dia fitaratry ny kamio ho an'ny andian-dahatsoratra New Hino & Volvo F110. Manao ny vokatra rehetra mahafinaritra sy maharitra ho an'ny mpanjifanay izahay. Manana ny mari-pankasitrahana momba ny CE sy ISO9001: 2008 izahay hiantohana ny kalitaon'ny vokatra vokarinay. Noho io fitsipika io dia mpanjifa marobe no lasa mpanjifantsika mahatoky hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ny tso-po sy ny fahamarinana dia ny soatoavina sy ny lanjan'orinasa lehibe. Izahay dia manome fahafaham-po ny mpanjifanay amin'ny vokatra avo lenta, serivisy fanao manokana, paikady matihanina ary paikady ara-barotra. Izahay dia manana ny fitaratra rehetra ilainao.manasa anao izahay hanatevin-daharana ny fianakavianay.Ny orinasanay mpiasa rehetra dia nametraka filôzôfia "tsy fivadihana, hafanam-po, manam-pahaizana, matihanina ary mahomby" mba hampisehoana ireo vokatra avo lenta indrindra. Ny orinasa hahatakatra sy hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny fahaveloman'ny fototra, ary hanamafy hatrany ny fahatsiarovan-tena ho an'ny mpanjifa sy ny fahatsiarovan-tena momba ny kalitaon'ny vokatra ary hiezaka hanome anao serivisy tsara kalitao indrindra. Amin'ity fandraisana an-tanana ataon'ny mpivarotra anatiny sy vahiny ity dia miantso ny filaminana mba hiaraha-miasa, manantena ny fiaraha-miasa aminao.
FAMPIHARANA Andiana Hino & Volvo F110 vaovao
Teo aloha: Fiara fitateran'ny kamiao PK9810
Manaraka: Fiara fitateran'ny kamiao PK9823
Fitaratra ny sisin'ny kamiao PK94PK9482